KingMarayu: January 2012
တ်ာဝင်သူရို့သွီးသစ္စာ ( ရင်တွင်းဖန်တီးမှုး အခန်းဆက်ဝ...
တ်ာဝင်သူရို့သွီးသစ္စာ ( ရင်တွင်းဖန်တီးမှုး အခန်းဆက်ဝတ္တူရှည် အပြီးသတ် )
တော်ဝင်သူရို့သွီးသစ္စာ ( ရင်တွင်းဖန်တီးမှုး အခန်းဆက်ဝတ္တူရှည် အပြီးသတ် )
နိန့်ရက်။........ ။ ၁၉၉၀ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၂၉ ရက်
" အေး ... အေး .. သားချေလေ့ ၁၀ နှုစ်ပြည့်အထိမ်းအမှတ်အနီနန့် ဘာဘာ ခေါ်လားပါမေ ဝေ..သားချေကို" ဆိုသော ခွင့်ပြုချက်ရပြီးနောက်မြတ်မင်းဦးသည် အလွန်ပျော်လျက် ရွာကြားထဲကို ဖင်ပုပါအောင်ပြီးလားလေသည်။ သူ့ အမိနှင့် အဖသယ်ကလေ့ သားချေကိုကြည့်လိုက် အပြုံးတိကိုယ်စီနှင့်။
မြတ်မင်းဦးရို.ဘုရားဖူးဘုတ်သည် ဂစ္စပနဒီမြစ်ကြောင်းအတိုင်းစုံဆင်းလာသည်။ ဘုတ်ထက် ကလ၀(လော်စပီကာ) က ဦးမောင်သိန်း တေးခြင်းသံ ညံ့ထွက်နီသည်။ ဘုတ်ထက်တွင် ဘုရားဖူးခရီးသယ်တိသည် သူစွာနှင့်သူ အလုပ်သျှပ်နီကတ်သည်။ အသျှေတိလည်းဘာသာဘာဝ ကစပ်နီကတ်သည်။
မြတ်မင်းဦး၏ ထူးဆန်းသောအမူအရာတိကို သူအဖက ဓမ္မာရုံကနီအကဲခတ်နီသည်။ မြတ်မင်းဦး၏ မျက်နှာတွင် ကြည်နူးမိအရိပ်တိသန်းနီသည်။ အပြစ်ကင်းသောသူ၏နှမ်းခမ်းချေတိသည် ကန်ရီပြင်ကို ငေးလျက် အပြုံးပန်းချေတိဝီဆာနီသည်။ ကစပ်မက်သော မြတ်မင်းဦးသည် မြောက်ဦးရောက်သည်နှင့် အလွန်ပင်တိတ်ဆိတ်နီသည်။ စကားလေ့ မီးမှပြောသည်။ ယင်းအပြင် တစ်ယောက်တည်နီရစွာကို ခုံမင်တတ်လာသည်။ သူအဖသည် မြတ်မင်းဦတွက် စိုးရိမ်လာမိသည်။
ဟုအော်ယောင်လီရာ ဓမ္မာရုံတစ်ခုလုံးနိုးကျသည်။မိုးလင်းသည်နှင့် ခြီကျင်ဘုရားဖူးအစီစဉ်စသည်။ မြတ်မင်းဦးသည် သူ့အဖော်တိနှင့်မနီဘဲ ဟြိ့က ဦးဆောင်လျှောက်နီသည်။ သူ၏စိတ်ထဲတွင် ဒေနီရာ ဒေလမ်းတိကို ရောက်ဖူးနီပိုင်တွိသည်။
အစုံဖူးကတ်သည်။ သူရို.သည် ဘားမီး ဘားကရား ဂူကိုလေ့ရောက်သည်။ ဖိုးခေါင်တောင်ထက်သို့တတ်လျက် မြောက်ဦးရှုခင်းကို ခံစားကတ်သည်။ ညနီ ၃ နာရီ ၄၀မိနစ်အချိန်တွင်ဘုရားဖူးအဖွဲဘုတ်ဆိတ်ကိုဆင်းဖို့ဘုန်ကြီးကျောင်းကို ပြန်လာကတ်ရန် ပြင်ကတ်သည်။ တစ်ညအိပ်ဘုရားဖူးခရီးစဉ်ဖြစ်သဖြင့် ည ၅နာရီတွင်ဘုတ်စထွက်မည်ဖြစ်သည်။ယင်းအချိန်တွင် မြတ်မင်းဦးသည် ဗြန်းနှင့်အဖသည်ကို တောင်းဆိုမူတစ်ခုပြုလာသည်။
ဟုတ်ပါသည်။ ဒေဘုရားဖူးအဖွဲ ကိုးသောင်းပုထိုးတော်ကြီးကို လားမဖူးကတ်ပါ။ ပဇာကြောင်းဆိုသော် ယင်းပုထိုးတော်ကြီးတွင်တောတိယောက်လျက်ဟိပြီး ကင်းမြွီများပင် ခိုကောင်းနီသည်ဟု မြို့ခံများကပြောကတ်ပါသည်။
" အဝေး သားချေ မဖြစ်၊ ဘာဘာရို ရွာကို ပြန်ဖို့ရာ၊ သားချေ ကြီးလာခါ အရာ တစ်ခါလာ၊ ယင်းမှာ မြွီတိ၊ကင်းကြီးတိဟိရေလတ်"။
ယေကေလေ့ မြတ်မင်းဦ နားမထောင်။ ငိုလျက်
နိန့်ရက်။......... ။ ၂၀၀၀ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၃၁
" နင်ရို.ငါ့ကို စာရွီးကတ်နန်း၊ ငါ အဖပြည်ကို လုံးဝ မခွဲချင်၊ယကေလေ့ ဘ၀ အခြေအနေအရ.. ဟီး ဟီး"
နိန့်ရက်။........ ။ ရခိုင်သက္ကရာဇ် ၁၁၄၁-၁၁၄၂ ၊ ပြာသိုလဆန်း (၁၀) ရက်၊ 1780AD ဒီဇင်ဘာလ။
"အေး အေး.. နှမတော်ပန်းချေတိအများကြီးခူးထား၊ပန်းတိအများကြီးရလာကေ နှမချေနန့်မောင်ကြီး.. ဒေ မောင်နှမ နှစ်မ နှုစ်ယောက် ဒေ ကိုးသောင်းပုထိုးတော်ကြီးမှာ လှူကတ်ဖို့ ၊ယပြီးကေ နှမချေချစ်ရရေ မောင်ကြီးနန်. မောင်ကြီးချစ်ရရေ နှမချေ.. ဒေမောင်နှမနှစ်ယောက်
ဘ၀ ဘ၀ ဆက်တိုင်းဆက်တိုင်းမှာ ဆုံတွိကတ်ဖို့ ဆုတောင်းကတ်ဖိုးနန်း နှမတော်"
မင်းသားချေ မင်းစော စကားအဆုံးတွင် မြကြာညိုမျက်နှာပါ အပြုံးပန်းချေတိ သန်းလာသည်။
နိန့်ရက်။........ ။ ရခိုင်သက္ကရာဇ် ၁၁၄၄-၁၁၄၅ ၊ တန်းဆောင်မုန်း လဆန်း(၅) ရက်၊ အင်္ဂလိပ်သက္ကရာဇ်: 1783AD အောက်တိုဘာ။
"ငါ့ရို. ရခိုင်ပြည်၊ ငါရို.ရွီနန်းတော်ကို ငါရို. အသက်နန့်လဲ ကာကွယ်မည်"
နိန့်ရက်။.......... ။ ၁၉၉၃ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ၊ ၃၀ ရက်
ဓာတ်တောင်အောက်တွင် ညင်ညင်သာသာ တိုက်ခိုက်နီသောလီဗွီချေသည် အင်ဂရားပန်းအနံ့ချေတ်ိကို မြတ်မင်းဦး နှခေါင်းသို့ယူဆောင်လာသည်။ဓာတ်တောင်ထက် လည်ရိုးတော်ဓာတ်ဇေတီမှ ခေါင်းလောင်းချေ မြည်သံတိ သဘာဝ ဂီတသံစဉ်ချေတိပိုင်။ မြတ်မင်းဦးတစ်ယောက် လီဗွီချေတိနှင့်အတူ ယိမ်းနွဲကခုန် လာသော အင်ဂရား ပန်းချေတိကို တယုတယ ငေးကြည့်နိန်မိသည်။
မြတ်မင်းဦးသည်ဓာတ်တောင်ကျောင်းသို့ ရက်ပြတ်အလည်ရောက်ဖြစ်သည်။ ပဇာကြောင့်ဆိုသော် မြတ်မင်းဦးရို့ အဖိုးသျှင်သည် ဓာတ်တောင်ကျောင်း၏ တကာအရင်း ဖြစ်ပြီး ပေါက်တောတွင်နိန်ထိုင်သည်။ မြတ်မင်းဦးသည် အဖိုးသျှင်၊ အဘောင်သျှင်ရို့ဘက်ကို နှစ်တိုင်းအလည်ရောက်တိုင်း အဖိုးသည်နှင့် ယင်းကျောင်းသို့ လိုက်လည်တတ်သည်။၁၃ နှုစ်သားအရွယ် မြတ်မင်းဦးကို ဓာတ်တောင်ကျောင်းဆရာတော်သည် အလွန်ချစ်သည်။ အဂုလည်း ဆရာတော်က ဘုရားတွင်ပန်းများ ကပ်လှူပှုဇော်ရန် မြတ်မင်းဦးကို ပန်းကောက်ခိုင်းလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။
မြတ်မင်းဦးတစ်ယောက် ပန်းချေတိကို အမြတ်တနှိုးကောက်နိန်ချိန်တွင် ကျောင်းနားမှ ကလိန့်မေတိ ရာယ်သံတိ လီဗွီချေနှင့်အတူ သူ့နားသို့တိုးဝင်လာသည်။ ကျောင်းဘက်ကိုလှည့်ကြည့်လိုက်ချိန်တွင် အသက် ၇ နှစ်ခန့်အရွယ် ကလိန့်မေချေတစ်ယောက်
မြတ်မင်းဦးဘက်ကို တတည့်ယှောက်လာသည်။ ထိုကလိန့်မေချေသည် ပန်းနှုရောင် စကတ်အတိုချေဝတ်ထားလျက် အထက်ပိုင်းတွင် အဖြူရောင်ဇာ အင်္ကျင်္ီချေကို ယယဉ်ချေဝတ်ထားသည်။ သူမဂေါင်းထက်တွင်လည်း အင်ဂရားပန်းချေတစ်ပွင့်ပန်လို့ ။
သူမ မျက်နှာချေကို အနီးကပ်မြင်လိုက်ရချိန်တွင် မြတ်မင်းဦး ရင်ထဲတွင် နာမည်ဖော်မပြနိုင်သောခံစားချက်တစ်မျိုးဖြစ်ပေါ်လာသည်။ ယေဘင်ဂေလေ့ မြတ်မင်ဦး မမြင်ဟန်ဆောင်လျက် ပန်းချေတိကို ဆက်ကောက်နိန်လိုက်သည်။
" ဟိဟိ....... ယောင်္ကျားချေ ဖြစ်ပြီးကေ မမချေ ပိုင် ပန်းကောက်နိန်ရေ" ထိုစကားကြောင်း မြတ်မင်းဦးမျက်နှာတွင် အဟြက်ပြုံးတိ ၀ီဆာလာသည်။ ကလိန့်မေချေ စကားသံသည် မပီတပီနှင့်ချစ်ဖို့ကောင်းသည်။ရင်းနှီးမှုအပြည့်လည့်ဟိသည်။
"ခိုင် ကိုလေ့ တစ်ပွင့် နှစ်ပွင့်လောက် ပီးဘလင်, ခိုင် က အင်ဂရားပန်းချေတိ ဆိုကေ ကောင်းကြိုက်တေ။" မြတ်မင်းဦးသည် ငြင်းဆန်ရန် အင်အားကုန်ခမ်းလျက်ဟိသည်။ " နှမချေ နာမည် "ခိုင်" လာ၊ " ဟု မြတ်မင်းဦး မီးကြည့်လိုက်သည်။
" မဟုတ်၊ သန်းဦးခိုင်၊ အိမ်မှာ နှမချေက အကြီးဆုံး၊ အဂု ပါပါရို့နန့် ပေါက်တောက အမျိုးတိဘက်ကို အလည်လာစွာ၊ ခိုင် က စစ်တွေ မြို့က၊ အကိုချေက ဇာကလဲ" ။ ကလိန့်မေချေ စကားပြောပုံသည် သွတ်သွတ်လွတ်လွတ်နှင့် ချစ်ဖို့ကောင်းသည်။
" အကိုချေ က ကြိမ်ခုံဂျိုင် ဆိုရေ ရွှာက ၊ အကိုချေ လေ့ ပေါက်တော က အဖိုးသျှင်ရို့ဘက်ကို အလည်ရောက်နိန်စွာ၊ ဒေကျောင်းကို အကိုချေ နှစ်တိုင်းရောက်တေ.....။" " ခိုင် လေ့ နှစ်တိုင်းရောက်တေ..... အကိုချေ အင်ဂရားပန်းတိ အများကြီး ဇာလုပ်
ဖို့လဲ၊ ခိုင်ကို တစ်ဆုပ်လောက်ပီးဘလင်" ။
မြတ်မင်းဦးသည် ထိုပန်းချေတိကို ဘုရားတွင် ကပ်လှူပှုဇော်မည်ဖြစ်ကြောင်း ယှင်းပြသည်။"ယကေလေ့ နှမချေအတွက် တစ်ဆုပ် အကိုချေ ပီးမေနန်း။" ယင်းအခါ သန်းဦးခိုင်က " ဘုရားမှာ ပှုဇော်ဖို့ဆိုကေ
နှမချေ မလိုချင်ယာ..... အကိုချေ နန့် ခိုင် ရို့ နှစ်ယောက်အတူ ဓာတ်တောင်ထက်က ဇေတီမှာ ကပ်လှူ ပှုဇော်ကတ်မေလေ.......။"
မင်းမြတ်ဦးနှင့် သန်းဦးခိုင်ရို့နှစ်ယောက် ထိုပြော ဒေပြောနှင့် တောင်ထက်ကို တရွိရွိတက်လာကတ်သည်။ လမ်းတလျောက်တွင်လည်း သန်းဦးခိုင်တစ်ယောက် သူ့သူငယ်ချင်းတိအကြောင့်၊ သူမ ကျောင်းအကြောင်း၊စစ်တွေမြို့အကြောင်း၊ မြောက်ဦးကို
ဘုရားဖှုးရောက်ခီရေ အကြောင်း စသဖြင့် ပြောမကုန်နိုင်အောင် တတွတွပြောပြသည်။ မြတ်မင်းဦးသည် နားမညိန်းနိုင်အောင် နားထောင်နိန်ချိန်တွင် ခေါင်းလောင်းချေ အသံတိ ကြည်ကြည်လင်လင် ကြားလာရသည်။
ကောင်းမကြာလိုက် မြတ်မင်းဦးရို့ဇေတီရင်ပြင်တွင်ခြီချမိသည်။ သူရို့နှစ်ယောက်သည် ဇေတီတော်အားပန်းတိကပ်လှူပီးဇော်ကတ်ပြီး ခေါင်းလောင်ထိုးကာ အချေဘာသာ ဘာဝ ပြီးလွှားကစပ်ကတ်သည်။ သူရို့နှစ်ယောက်သည် ဘုရားနောက်တိတွင် ၀ှက်တန်းပုန်းတမ်း ကစပ်ကတ်သည်။ယင်းသို့ဖြင့် သန်းဦးခိုင်နှင့်မြတ်မင်းဦးရို့ခင်မင်မှုသည် တချက်ချေ အတွင်းတွင် အလွန်ပင်ခိုင်မြဲလားလီသည်။
"သမီးချေ သန်းဦးခိုင် ပါပါရို့ အိမ်ပြန်ဖို့ယာ၊" အဖသည်ခေါ်သံကြားမှ သူရို့ကစပ်စွာရပ်လိုက် ကတ်သည်။ မြတ်မင်းဦးသည် ကလိန့်မေချေကို နှမချေအရင်းပိုင် ခင်မင်မိသည်။ ဖြစ်နိုင်လျှင် ကလိန့်မေချေနှင့် အတူလား၊အတူနိန်၊အတူကစပ်ချင်သည်။
" အကိုချေ၊ ခိုင်ရို့ လားဖို့ယာ.... နောက်နှစ်ခါ အရာတစ်ခေါက်ပြန်လာဖို့ ၊ ယင်းခါ တွိကတ်ဖို့နန်း" စကားတစ်ခွန်မှ ပြန်မပြောသော မြတ်မင်းဦးကို ဆရာတော်နှင့် သန်းဦးခိုင်အဖ သယ်ရို့ ခေါင်းခြစ်နိန်ကတ်သည်။ " အဝေး ဒေသူ မြတ်မင်းဦး၊ ပြန်ပြောလိုက်
လေ..... ဒေ သူအဆွိ့...။" ဆရာတော်မှ အားမရ ဒရ ပြောလိုက်မှ မြတ်မင်းဦး သတိပြန်ဝင်လာသည်။
" အေး ...အိန်း ... ခိုင်.. နောက်နှစ်ခါ တွိကတ်ဖို့။" ယင်းပိုင်ပြောလိုက်မှ ကလိန့်မေချေ အပြုံးပန်းချေတိပွင့်လန်းလာသည်။ အဖသယ်၊သူငယ်ချင်းတိနှင့်ကျောင်းမှထွက်ခွာလားသော သန်းဦးခိုင်ကို နောက်ကုံးချေကိုကြည့်လျက် မြတ်မင်းဦးတစ်ယောက် ငိုချင်စိတ်တိနှင့်ကျင်ကိုင်နိန်လိုက်ရသည်.........။
အချိန်။..............။ ရခိုင်စံတော်ချိန် နိန့်ခြင်းဘက် (၂) နာရီ
မြန်မာနိုင်ငံနိုင်ငံရေး မငြိမ်းသက်မူများ၊ အစိုးရခြစားလိုက်စားမှု လက်ဟိလူမျိုးများကိုယ်ပိုင်ပြဌာန်းပိုင်ခွင့်တောင်းဆိုမှုများနှင့် အနောက်နိုင်ငံတစ်ချိုးစီးပွားရေးဒဏ်ခက်များသည် မြန်မာနိုင်ငံနှင့်ရခိုင်လူမျိုးများအား တွင်းဆုံးကျမှုရို့ဖန်တီးနိန်သည်။ ယင်းဟင့်တောင်မကသိမ့်ဘဲ ရခိုင်ပြည်နယ်ဟိ လက်တစ်ဆုပ်စာလူတန်းစားရို့အနိုင်ကျစီးပွားရေးဂုတ်သွီးစုပ်မှု၊ အခွန်မတန်တဆကောက်ခံမှု၊ လူမှုရေးခွဲခြားဆက်ဆံမှုရို့နှင့် အဖရခိုင်ပြည်ကျင်ကိုင်နိန်ရသည်။
မြတ်မင်းဦးသည် ဆယ်တန်းစာမေးပွဲကို အမှတ်ကောင်းဖြင့် ၁၉၉၇ ခုနှစ်တွင်အောင်မြင်ပြီးနောက် အင်္ဂလိပ်မေဂျာယူကာ ရန်ကုန်တွင် အလုပ်တစ်ဘက်နှင့်ရုန်းကန်နိန်ရသည်။ လူငယ်၊လူရွှယ်၊လူလတ်ရို့လည်း ရခိုင်ပြည်ကြီးအားစွန့်ခွာလျက် အတိုင်းတိုင်း အပြည်ပြည်တွင် ၀မ်းရေးအတွက် အဖပြည်နှင့်ခွဲကာ အလုပ်လုပ်ကြရလီသည်။ ရခိုင်ပြည်နယ်သည် မြန်မာနိုင်ငံအဆင်းရဲဆုံးပြည်နယ် တစ်ခုဖြစ်ရန်တာစူးနိန်ပြီး၊ လူငယ်လူရွှယ်ရို့ခြခြောက်ခမ်းကာ အလုက်အကိုင်ရို့လည်း ဘုရားချီးတိပိုင် ရှားပါးလျက်ဟိသည်။
မြတ်မင်းဦးလည်းရခိုင်ပြည်နယ်တွင်ဆက်နိန်လျှင်ဇာဘ၀တိုးတက်မှုလမ်းကြောင်းမှရှာမတွိလီရာအခွင့်အလမ်းရို့ဟိရေမြန်မာပြည်မှ ရန်ကုန်မြို့တော်သို့ ၂၆၊ဇွန်လ၊၂၀၀၅ ၊ ရခိုင်စံတော်ချိန် နိန့်ခြင်းဘက် (၂) နာရီ တွင် စစ်တွေမှ လိုင်းကားဖြင့်ထွက်ခွာလာခြင်းဖြစ်သည်။ ၂ နှစ်လောက်ကြာပြီးနောက်ပိုင်း မြတ်မင်းဦးသည် အလုပ်ကြိုးစားလိုက်ကိုင်နိန်ယင်း တစ်ဘက်မှလည်း သူဝါသနာပါသော အင်္ဂလိပ်စာကို အပြင်းအထန်ကြိုးစားသင်ယူနိန်သည်။ သူသည် အင်္ဂလန်သံရုံးအင်္ဂလိပ်စာဌာန၊ အမေရိကန်စင်တာရို့အင်္ဂလိပ်စာလေ့လာရန် ရန်ကုန်ရောက်ရခိုင်သားများပံ့ပိုးပီးမှုဖြင့် အခွင့်အလမ်းရို့ပွင့်လာသည်။
အင်္ဂလိပ်စာနှင့်နိုင်ငံရေးအားသန်သော မြတ်မင်းဦးသည် နိုင်ငံခြား သက္ကသိုလ်တစ်ခုတွင် နိုင်ငံရေးသိပ္မံ ဘာရပ်တစ်ခုသင်ယူရန် အားပါလျက်ဟိပြီး နိုင်ငံခြား သက္ကသိုလ် အသိမှတ်ပြု အင်္ဂလိပ်စာစာမေးပွဲရို့ဖြေဆိုရာ အမှတ်ကောင်းရို့ဖြင့်အောင်မြင်လီသည်။ ၂၀၀၇ ခုနှစ်တွင် မြတ်မင်းဦး အမေရိကန် သက္ကသိုလ်တစ်ခုမှ စကော်လာချီးမြှောက်ခံရပြီး ပညာသင်ရန် အဖရခိုင်ပြည်ကြီးနှင့်အ၀ီးကြီးရာတိုင်းတပါးသို့ထွက်ခွါလားလီသည်။ မြတ်မင်းဦးသည် အလုပ်လုပ်ကျောင်းတက်ယင်း ၂နှစ်ခန့်အကြာတွင် အဖရခိုင်ပြည်အား အလွန်ပင် တမ်းတလွမ်းဆွတ်လာသည်။
အိမ်တာနတ်မှ ရခိုင်အကြောင်းတိဝင်ဖတ်ယင်း ရခိုင်ထမင်းရခိုင်ဟင်းရခိုင့်အငွိ့အသက်ချေတိအရှုးအမှုးတမ်းတမိလာသည်။ အမေရိကန်တွင်၂နှစ်အတွင်းမြတ်မင်းဦးသည်မြတ်ပန်းခိုင် နာမည်ရရခိုင်ပညာတတ်ဝါကြီးမတစ်ဦးနှင့် အဘောင်သျှင်တစ်ယောက်ပိုင်ခင်မင်မိပြီး၊ ကျောင်းအားရက်တွင် ယင်းအဘောင်အိမ်မှာ ရခိုင်ထမင်း၊ ရခိုင်ဟင်း တစ်ဝစီ လားစားတတ်သည်။
နိန့်ရက်။…………..။ ၂၀၀၉ နှစ်၊ အောက်တိုဘာလ၊ ၁၅ ရက်
အချိန်။ …………။ ညဉ့်ခါဘက် ၉ နာရီ
နီရာ ။ ………….။ အမေရိကန်နိုင်ငံ၊ နယူယော့ခ် မြို့
“…………ကလိန်……ကလိန်…….ကလိန်….ကလိန်……..။…စာဖတ်နိန်ရင်း ဖုန်းမြည်လာသည်။ ဖုန်းကို မြတ်မင်းဦး ကောက်ကိုင်လိုက်ချင်း……..
“ ဝေး …….မြတ်မင်းဦး…, အဘောင်ရာဒေ…အိပ်နိန်လာမင်း…., အဘောင် မင်းကို
၀မ်းသာစရာ စကားပြောစရာဟိလို့ ဖုန်းဆက်စွာ…….” ဇာဝမ်းသာစရာလေဂု မြတ်မင်းဦး ခေါင်းခြမ်းနားထောင်မိသည်။ ……..
“ ဟုတ်ပါယင့် အဘောင်သျှင် ပြောပါ…”
…..” ၀မ်းသာစရာကဇာလေ့ဆိုလို့ဟိခကေ…. အဘောင် ရခိုင်ပြည်ကို မရောက်စွာ ကောင်းကြာယာမလား……ယင်းအတွက် နန့်
ဒီဇင်ဘာလလောက်ကေ ရခိုင်ပြည် မြောက်ဦးကို အဘောင်လားချင်လို့ ……..”
မြောက်ဦး၊.... မြောက်ဦး.... အသံတိ ပဲတင်ထပ်လာသည်။ အချေခါ တစ်ခါရောက်ဖူးခသော မြောက်ဦးကို ဘ၀ကံမပီးလို့ မြတ်မင်းဦး ထပ်ပနာမရောက်ဖူးခလီ။ ကိုးသောင်းပုထိုးတော်ရှိဘက် ကန်ဘောင်ဘေးမှာ အချေခါ မှုးလဲကျဖူးသည်ကို မြတ်မင်းဦး ပြန်မြင်လာသည်။
“ ဝေး…မင်းဦးချေ…ကောင်းတိမ်းလာကာဂု…နိန်လို့က ကောင်းယင့်လားမင်း ….” အဘောင်ဂရုနာအသံနှင့်ဖုန်းထဲက အသံကြားမှ မြတ်မင်းဦး ဗြန်းပြန်နိုးလာသည်။
“ အော်… ကန်တော့ပါအဘောင်ချင်….ကျွန်တော် နိန်ကောင်းပါရေ….ဟုတ်ပါယင့်ယကေ မြောက်ဦးကို
ခရစ်စမတ်နန့် ကျောင်းတိလေ့ ပိတ်ပါရေဒေ……မရောက်ဖြစ်စွာလေ့ ကြာပါယာ ကိုယ့်ဘားကို…..” မြတ်မင်းဦး အဘောင်စကားကိုဆက်တိုက်ထောက်ခံပြောဆိုလိုက်သည်။
……”……. ယင်းအတွက်နန့် မင်းဦးကို အဘောင်သျှင် ဖုန်းဆက်နိန်စွာ..သိလာ…အဘောင်မှာ က မြီးတိ၊ သားတိ၊သမီးတိလေ၊
သိလာ..၊ အလုပ်တိနန့်ကျင်ကိုင်နိန်ကတ်ယင့်…အဘောင်လေ့ တစ်ယောက်တည်းမလားချင်ဒေ
ယလောက်အ၀ီးကြီးကို မြီးချေ……..ငါမြီးချေမှာ အလုပ်လေ့ အားကေ အဘောင်ကို လိုက်ပို့ပီးလို့ရဖို့လား ……..”…..၊ မြတ်မင်းဦး
ဂရုနာအလွန်သက်မိလားသည်။ ယေကေလေ့ ဖေ့သာက ယလောက်မဟိ..ကျောင်းတစ်ဘက် အလုပ်တစ်ဘက်နှင့် မကာမိနိုင်……….။
“……..အဘောင်သျှင်၊ ကျွန်တော် ကောင်းလားချင်ပါထော..ယကေလေ့ ဘိုင်ပြတ်နိန်ပါရေ အဘောင်…” … စကားမဆုံးလိုက် ၀ါကြီးမ အသံထွက်လာသည်…။ …
” ယင်းကိစ္စမပူဂေ့ မင်းဦး၊ လီယိုင်ပျံစရိုက် အဘောင်ခံမေ……မင်းစီစဉ်စရာဟိစွာတိရာစီစဉ်….နန်း…ယလောက်ယာ
အဘောင်နန့် နောက်ဆွေးနွေးကတ်ဖို့ အသေးစိပ်ကို……….”
မြတ်မင်းဦးအလွန်ပင်ဝမ်းသာမိသည်။ အဘောင်သျှင်ကိုလေ့ကောင်းကျေးဇုတင်မိသည်။ ယင်းနောက် ပြတင်းပေါက်ကို ဖွင့်လိုက်ပြီး…….။
“ ငါ မြောက်ဦး ကို နောက်တစ်ခေါက်ရောက်ဖို့ယာ …ဝေး ……..ဝေး……..မြောက်ဦး ငါလာယာဒေ …………..” ဟု နယူယောခ် မြို့ထဲဘက်ကို ကြည့်ပနာ အားရဘရအော်လိုက်မိသည်။
မြတ်မင်းဦးအသံသည် နယူယော့ခ်မြို့မှ လီအီးရို့ ၊ ခေတ်မီ မီးဆလိုက်ရို့နှင့်အတူယဉ်တွဲကလို့ ………….။
အောင်တိုဘာလဘဇောင်ကုန်လားလေမသိ၊ ကျောင်းတတ်ယင်း လက်ကျန်စာတိကိုရှင်းယင်း အောက်တိုဘာလ(၃၀)ရက်နိန့်သို့
့ရောက်ဟိလာသည်။ အဘောင်သျှင်ကလေ့ဒေနိန့်ဖုန်းဆက်မည်ဟု မြတ်မင်းဦးကိုမှာထားသည်။ ညစာထမင်းစားနိန်ယင်းပင် ဖုန်းတမ်းမြည်လာသည်။ အဘောင်သျှင်မှန်း မြတ်မင်းဦးသိလိုက်သည်။ ဖုန်းကိုကောင်လိုက်သည်နှင့် ဖုန်းထဲက အဘောင်သျှင်အသံကြားရသည်။...........,
"မင်းဦးလား၊ အဘောင်ရာ၊ မင်းအထုပ်အပိုးတိ အဆင်သင့်ဖြစ်ရာလောယဂေ...... မင်းနန့်အဘောင်ရက်ညို့ရဖို့ဒေ၊
ဒီဇင်ဘာလ(၂၉) ရက်နိန့်ထွက်ချင်ရေ၊ ယပြီးဂေ မြောက်ဦးကို ရန်ကုန်မှာ တနားချိန်နားပြီးကေ တန်းလားဖို့
အဘောင်စီစဉ်ထားရေ၊ မင်းသဘောကဇာပိုင်လေ၊ အဂု အဘောင်လီယိုင်လက်မှတ်ဝယ်ဖို့လို့၊........"
အဘောင်စကားတိတန်းစီပြောသည်၊ မြင်မင်းဦးလေ့ဂရုတစိုက်နားထောင်းယင်း ............
" ဟုတ်ပါယင့်အဘောင်၊ (၂၉)ရက်နိန့်ဆိုကေတော့ခါ ကျနော့လေ့ အချိန်တစိချေ ရဖို့ပါမလားယေ၊
ယင်းနန့် ယင်းနိန့်မှာ ဇာအတွက်လားချင်စွာပါလေ..........." မင်းမြတ်ဦး စပ်စုမီးကြည့်လိုက်မိသည်။...
........." အေး.......ဒေပိုင် မင်းဦး.......အဘောင်လေယင်..ရခိုင်မှာနိန်ခခါ.....အဘောင်ရို့အိမ်နားမှာ
သန်းဦးခိုင်လို့ခေါ်ရေ ကလိန့်မေချေ တစ်မိသားစုဟိရေ..........၊ သန်းဦးခိုင်ရေ ကောင်းချစ်ဖို့ကောင်းရေ၊
" ငါ...အချေခါ၊ ဓာတ်တောင်မှာ အတူကစပ်ခဖူးရေ ကလိန့်မေချေလာဂု၊...အော်...နာမည်တူစွာဖြစ်ဖို့ထင်ရေ...."
"...မင်းဦး၊ မြီးချေ၊ အဘောင်ပြောစွာကိုကြားလာ.....ကောင်းတိမ်းလခဂါ...၊" အဘောင်းဖုန်းထဲကလှမ်ခေါ်ခါမှ မြတ်မင်းဦး စဉ်းစားခမ်းပြတ်လားသည်၊ ....." နားထောင်နိန်ပါရေ အဘောင်" မြတ်မင်းဦးပြန်ဖြေလိုက်သည်နှင့်အဘောင်သျှင်ဆက်ပြောသည်။
" အေး....ယင်းသန်းဦးခိုင် နောက်ရန်ကုန်ကို မိဘတိနန့်ပြောင်းလားရေလေ...အဘောင်လေ့ အမေရိကကိုထွက်ပါလတ်တေ၊အဂုအဘောင်အမေရိကလာဖို့ဆိုလို့အလုပ်တိပစ်ပနာ စောင့်နိန်ဖို့လတ်....ယင်းနိန့်မှအားရေလေပြောရေ၊ … အစီအစိုင်ကဒေပိုင်၊ မင်းဦး ...ရန်ကုန်ကို (၃၀) ရက်နိန့်ရောက်ဖို့...ယင်းနိန့်တနားအညောင်းဖြေပနာယင်... စစ်တွေ တိုက်ရိုက်လေယိုင်စီးဖို့မလား၊
စစ်တွေမှာ တစ်ညအိပ်ပနာ၊ ဒီဇင်ဘာ(၃၁) ရက်နိန့်မြောက်ဦး ကို မိုးထဖသား ဘုတ်နန့်တန်းထွက်ကတ်ဖို့ ....
ဒီဇင်ဘာ(၃၁)ရက်နိန့် မြောက်ဦးလားဖို့ရက်ကို မြတ်မင်းဦးမကြိုက်ချင်၊ ဇာအတွက်နှင့်မကြိုက်ချင်မှန်းမသိ၊ အဖြေရှာခက်နိန်သည်။ လူကြီးစီစဉ်ထားသည့်အရာကိုစောဒလေ့မတတ်ချင်၊ ယင်းကြောင့် အဘောင်သျှင်လားဖို့ရက်ကို မြတ်မင်းဦးသဘောတူလိုက်သည်။
နိန့်ရက်။...........။ ဒီဇင်ဘာလ (၂၉) ရက်၊ ၂၀၀၉ ခုနှစ်
အချိန်။............။ မိုးထဖသား(၅) နာရီ
နီရာ ။.............။ New York ၊ Kennedy Airport
China Eastern Airlines မှ ၃၄၆ AirBus Jet လီယဉ်ကြီးသည် Terminal (1) မှ စတင်ထွက်ခွာလာသည်၊ ခရီးသည်ရာကျော်စီနှင်းလိုက်ပါလာသော ဂျတ်လီယဉ်ကြီးသည် မိုးသား မိုးတိမ် အလိပ်လိပ်ရို့ကို မညောင်းနိုင် မပန်းနိုင်ကျော်ဖြတ်လျက် ဘန်ကောက်မြို့တော်သည်ဦးတည်ပျံသန်းလီသည်။ ဒိုဟာမြို့တွင် တစ်ခေါက်ရပ်လျက် ပျံသန်းချိန် နာရီ ၂၀ ကျော်အကြာတွင်ဘန်ကောက်မြို့သို့ရောက်ဟိပြီး၊ ဘန်ကောက်မှ တစ်ဆင့် ဘန်ကောက်အဲယားဝေးဖြင့် ရန်ကုန်မြို့သို့ပျံသန်းရလီသည်။
ဒီဇင်ဘာလ(၃၀) ရက်နိန့်တွင် ရက်ကုန်မြို့သို့ရောက်ဟိပြီး သန်းဦးခိုင်ရို့အိမ်တွင် တစ်ညဉ့်နားခိုအိပ်စက်ကတ်သည်၊
(၃၁) ရက်နိန့်တွင် ရန်ကုန်မှ စစ်တွေသို့ မြန်မာအဲယားဝေးဖြင့် မြတ်မင်းဦး၊ သန်းဦးခိုင် နှင့်အဘောင်သျှင်ရို့ (၃) ယောက် အဖရခိုင်ပြည်သို့ဦးတည်လာသည်။ပျံသန်းချိန် မိနစ်၁နာရီခန့်အကြာတွင်ရခိုင်ပြည်ကြီးအားလီယိုင်ပျံထက်ကလှမ်းမြင်ရသည်။ တောင်စွယ်တောင်တန်းရို့နန့်ရိုးမအရိပ်ခိုရခိုင်ပြည်သားရို့နှင့်ဝီးကွာခရက်လတိလေ့ကကောင်းကြာခပြီဖြစ်သည်။
စစ်တွေလီဆိပ်မဆင်မှီ အဘောင်သျှင်တစ်ယောက်ကကောင်းငြိမ်နိန်သောကြောင့် မြတ်မင်းဦး လှမ်းကြည့်မိသည်။ တည်ငြိမ်ရင့်ကျက်သော အဘောင်သျှင်မျက်လုံးအိမ်တွင်မျက်ရည်စချေတိစိုနိန်သည်ကို မြတ်မင်းဦး သတိထားမိသည်။
တန်းခါးပွင့်လာသည်နှင့်မြောက်ပြန်လီရှုးက မြတ်မင်းဦးအသိစိတ်ကိုနှိးဆွလိုက်သည်။ “ အော်..ရခိုင်ပြည်ကို ငါပြန်ရောက်လို့လာဗျာယ်” တစ်ယောက်တည်းတတိုးချေရွှယ်ရွှက်မိသည်။ အဘောင်သျှင်လက်ကိုမြတ်မင်းဦးနှင့် သန်းဦးခိုင် တစ်ယောက် တစ်ဘက်ကိုင်လျက် လီယိုင်ထက်ကဆင်းလာကတ်သည်။ မြီကြီးအရောက်တွင် အဘောင်သျှင်သူအဆင်ပြေကြောင်းပြောသည်။
ယင်းနောက် မြတ်မင်းဦးသည် စစ်တွေလီဆိပ်မှ စိမ်းစိုနိန်သော မြက်တစ်ဆုပ်ခူးပြီးနမ်းရှုလိုက်သည်။ ရယ်သံကြားလို့နောက်လှမ်းအကြည့်တွင်……….
“ ယော်..ဇာလေဂု အကိုမြတ်မင်းဦးရို့ မြတ်တိကိုတစ်ခုနမ်းနိန်ရေဂါ…အရာ..ခွီးချီးတိပါကေ ဂွကျကတ်ဖို့ဒေ…ဟဟ..” သန်းဦးခိုင် လှမ်းကစပ်သည်။
မြတ်မင်းဦး ပြန်ပြုံးပြလျက်……” ရခိုင်ပြည်ကြီးနန့်ကကောင်းအကြာကြီးဝီးနိန်လို့ နမ်းပြီးကေ နှုတ်ဆက်လိုက်စွာပါယာ….ခွီးချီးမပြောဂေ့ ပါချင်စွာပါလီပတ်စီ..သန်းဦးခိုင်ရို့က ရန်ကုန်သမတိဆိုတော့ခါ အဖရခိုင်ပြည်ကြီးကို သံယောဇဉ်ပြတ်လားဗျာယ်ဟန်…”ပြုံးလျက် စကားနာထိုးမီးလိုက်သည်။…..
“ အော် ..အကိုမြတ်မင်းဦးကလေ့ ကိုယ့်ဓလေ့ ကိုယ့်ရွှာ ကိုယ့်မြီ ကိုယ့်ပြည်ဆိုစွာ မိကောင်းရေ အရာတိမဟုတ်ပါလေ…အကျွန်လေ့ အဖပြည်ကိုချစ်လို့ အကိုရို့နန့် လိုက်လာပါရေ မလားယေ….. အကျွန်က အချေခါကဘင် ရခိုင်သမိုင်းနန့်အကျွမ်းဝင်ပြီးသားပါ…..အဖိုးသျှင်ရက်ပြတ်ပြောပြဖူးပါရေ…….”
“ ဟုတ်ပါယင့် …ကျွန်တော် ကစပ်စွာပါရာ…မာန်မပါ ပါဂေ့နန်း ၊ သန်းဦးခိုင် အဖပြည်ကိုချစ်တတ်မှန်း မျက်လုံးတိက သက်သီပြနိန်ပါရေ……အဘောင်ဖက်ပြန်လားကတ်ပါမေ..”
စစ်တွေမြို့မှသန်းဦးခိုင်ရို့အမျိုးတိလီဆိပ်လာကြိုကတ်စွာတွိရသည်။အဘောင်သျှင်နှင့်မြတ်မင်းဦးရို့ စစ်တွေမြို့လမ်းမကြီးမှpalace hotel တွင်ညအိပ်ရပ်နားသည်။
သန်းဦးခိုင်ကအမျိုးတိအိမ်တွင်တည်းခိုးရန်အတွက်ဟိုတယ်မှလမ်းခွဲထွက်လားသည်။မြူခိုးငွှေ့တိဖုံးလွှမ်းနေသာစစ်တွေမြို့ညဉ့်သဘာဝအလှကိုဟိုတယ်ထက်က ငယ်မောခံစားယင်း မြတ်မင်းဦးအိပ်ရာ ယင်းလို့ဝင်လိုက်သည်။ မိုးထဖ ၁၀နာရီတွင်မြောက်ဦးကိုမော်တော်ဘုတ်နှင့်ခရီးဆက်ရမည်။
နိန့်ရက်။……..။ ဒီဇင်ဘာလ (၃၁)
ဆက်ရကျချောင်းမှ ဂျမ်မာစက်ချေ တက်ထားသော မော်တော်ဘုတ်သည် မြောက်ဘက်သို့ဦးတည်မောင်လာသည်။ အင်ဒန်တအင့်အကြာတွင် မော်တော်ဘုတ်ချေက ဂစ္စပ မြစ်ပြင်ကြီးကို အသာချေနမ်းလိုက်သည်။ အီးမြကြည်လင်လက်ဆက်သောတပေါင်းလမြောက်ပြန်လီသည် မြတ်မင်းဦးနားခေါင်းကို အသာချေလာပွတ်သည်။ မြတ်မင်းဦးသည် ရခိုင်လီပြေအား အာခေါင်မှ အသဲအောက်ခရင်းသို့ အားရဘရ ရှုသွင်းလိုက်သည်။
ကကောင်းမကြာလိုက် လုံးပတ်ညီသောဦးရဇ်တောင်စေတီကို ဖူးတွိလိုက်သည်။ အဘောင်သျှင်နှုင့်သန်းဦးခိုင်ပါ ဦးခိုက်ကတ်သည်။ ဘုတ်ပဲ့ဘက်တွင်အလုပ်သမားတစ်လီဖဲ့ကစပ်နိန်ကတ်သည်။ ………….
“ အယင်ခေါက်ခါ ရခိုင်ရီတပ်မတော် ဒေမှာ အခြေစိုက်တေလို့ ရာဇ၀င်ဟိရေ မြီးချေရို့…” အဘောင်သျှင် သန်းဦးခိုင်နှုင့်မြတ်မင်းဦးကိုဖောက်သည်ချသည်။
အဘောင်သျှင်ပြောရာတွင် မဟာမြတ်မုနိန်ဘုရားအကြောင်းပါသည်။ သေလာဂီရိတောင်ထက်က မြတ်ဘုရားက ဓည၀တီမြို့သားရို့ကို ဗျာဒိတ်ပီးပုံအကြောင်းပါသည်။ ရခိုင်ဘုရင်ရို့အာဏာစက်ကျယ်ဝန်းခပုံရို့၊ မွန်ဂိုပုံကန်မှု၊ အနောက်နိုင်ငံရို့က ရခိုင်မြောက်ဦး ကုန်တိုက်ဖွင့်ခရေအကြောင်းတိ အစုံပါသည်။
ထိုအကြောင်း ဒေအကြောင်း အကြောင်စုံကို အဘောင်သျှင်တစ်ယောက် မညောင်းနိုင်ပြောရင်းဆိုရင်း မြောက်ဦးချောင်းသို့ မော်တော်ဘုတ်ချေ နှုတ်ဆက်လိုက်သည်တွင်၊..နွမ်းအိုခြောက်သွိ့ ရညို့တင်နိန်သော စေတိပုထိုးအပျက်ရို့ မြတ်မင်းဦးလှမ်းမြင်လိုက်သည်။
“ သန်းဦးခိုင်…..၊ ဒေဘုရား ပုထိုးဘ၀တိ သနားဖို့ကောင်းလိုက်တေဘင်၊ လူပင်လာမဖူးဟန်…” မြတ်မင်းဦး စိတ်မကောင်းစွာ လှမ်းပြောသည်။
……….” အကိုမြတ်မင်းဦး……… မြောက်ဦးနန့်ဘုရားအဟောင်းအပျက်ဆိုစွာ ဒွန်တွဲနိန်ရေ အရာတိပါရာ….ဇာပိုင်ဘင်ဆိုဆို..ဒေကျောက်သား၊ကျောက်စိုင် ဘုရားပျက်တိရေ တစ်ချိန်ကကြီးကြယ်ခမ်းနားခရေ ရခိုင်ရို့ပြယုတ်မဟုတ်ပါလာ………..”
……..” သန်းဦးခိုင်ပြောစွာလေ့ဟုတ်ပါရေ…..ယဂေလေ့ ပြုပြင်မွန်းမံပနာ ကျိုးပဲနိန်ရေ ရခိုင့်ယဉ်ကျေးမှု အနှလက်ရာတိကို ကျနော် စိတ်နန့်ဆက်ကြည့်နိန်မိစွာအမှန်………”
ယင်းပိုင်စကားပြောနိန်ကတ်ယင်း မော်တော်ဘုတ်ချေက မြောက်ဦးရှေးဟောင်းယဉ်ကျေးမှုနယ်မြေ ဆိုရေဂိတ်ရှိတွင်ရပ်နားလိုက်သည်။ အဘောင်သျှင်၊မြတ်မင်းဦး၊ နှုင့် သန်းဦးခိုင်ရို့သုံးယောက် မြောက်ဦးမင်းသမီးဟိုတယ်တွင်တည်းခိုးရန်ဆုံးဖြတ်လိုက်ကတ်သည်။ ညဇာဖက်သား နီဒ၀င်ဒရှုးအချိန်တွင် မြတ်ဦးနှင့်သန်းဦးခိုင်ရို့နှုစ်ယောက် မြောက်ဦးတစ်ပတ်လှမ်းလျှောက်ထွက်ကြည့်ကတ်သည်။ အဘောင်က ဟိုတည်တွင်အညောင်ဖြေကျန်လိုက်သည်။………
……“သန်းဦးခိုင်…” မြတ်မင်းဦးလှမ်းခေါ်သည်။ “….အမှန်ကိုပြောရကေ.. မြောက်ဦးမြို့ကို ခြီချလိုက်စွာနန့် အတိတ်သမိုင်းတစ်ခုက ဖမ်းစားခြင်းကို ခံရရေပိုင် ကျနော်ခံစားမိစွာအမှန်”…. မြတ်မင်းဦး လမ်းလျှောက်ရင်းစကားစလာသည်။…….” ဟုတ်တေ ကိုမြတ်မင်းဦး….ထူးဆန်းစွာ အကျွန်လေ့ ဒေမြောက်ဦးဆိုရေနိန်ရာနန့် ကကောင်းကြီးရင်းနှီးကျွမ်းဝင်နိန်ရေပိုင်ခံစားရရေ…တစ်ခါ၊တစ်လီ ၀မ်းနည်းရေပိုင်၊ တစ်ခါတစ်လီဝမ်းသာရေပိုင်ခံစွာမိစွာတော့ခါ အမှန်ပါ….”
“ အင်… ကျနော်ရို့တိက ရခိုင်လူမျိုးတိဆိုခါ ရခိုင်ရို့သမိုင်းမှတ်တိုင်းကြီးမားခရေ မြောက်ဦးဆိုရေအတိတ်ဖမ်းစွာခံရစွာလေ ဖြစ်နိုင်ပါရေ နန်း….” မြတ်မင်းဦး မှတ်ချတ်အပြီးမှာ နှုစ်ယောက်လုံးတိမ်းကျလားသည်။ မြောက်ဦးနှစ်သစ်ညသည် အမေရိကမှာပိုင် စိတ်လှုပ်ရှားစရာမဟိ၊ ရန်ကုန်မြို့မှာပိုင်ပျော်စရာရှာမတွိပါ……..တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်လှသည်။ အတိတ်ကအရိပ်မဲတိနှင့်မြောက်ဦးကျင်ကိုင်နိန်ရတုန်းလား မြတ်မင်းဦး မခွဲခြားတတ်…………….။
မိုးထခါစစောကြီးထလျက်မြောက်ဦးဘုရားစုံဖူးလားကတ်မည်ဖြစ်ရာ သူရို့(၃)ယောက် တိတ်ဆိတ်သောမြောက်ဦးဆောင်းညကိုနှုတ်ဆက်ယင်း အိပ်ရာအစောကြီးဝင်လိုက်ကတ်သည်။
နိန့်ရက်။………….။ ဇွန်န၀ါရီလ (၁) ရက်၊ ၂၀၁၀ ခုနှစ်
အချိန်။…………..။ မိုးထဖက် (၇) နာရီ
နယူးယောက်ဆောင်းနှင့်အသားကျလာသောမြတ်မင်းဦးသည် မြောက်ဦးဆောင်းကိုမထုန့်ပါ။ ယဘင်လေ့သင့် ဆောင်းဝတ်အင်္ကျီအထူးကြီးဝတ်ထားသောဈီသည်မရို့ ဝေလီဝေလင်းအချိန်တွင် မြောက်ဦးမင်းသမီးဟိုတယ်ရှိဖြတ်လားဖြတ်လာနိန်ကတ်သည်။ သူရို့တစ်နိန့်တာဝမ်းရေးကိုမြောက်ဦးဆောင်းကမတားဆီးနိုင်။ သန်းဦးခိုင်အတွက် မြောက်ဦးဆောင်းသည်အလွန်ဘင်ချမ်းအီးလှသည်။ ဆောင်းဝတ်အင်္ကျီအဖြူဝတ်ထားသော သန်းဦးခိုင်သည် မြူနှင်းဖြူချေရို့နှင့်အပြိုင်ချစ်ဖို့ကောင်းသည်။ မြတ်မင်းဦးအတွက် သန်းဦးခိုင်သည် နှမချေတစ်ယောက်ပိုင်ခင်မင်တွယ်တာဖို့ကောင်းသောအပြစ်ကင်းသောသဇင်ပန်းခိုင်ချေတစ်ခိုင်……….
ဟိုတယ်ကစီစိုင်ထားသည့်အတိုင်း ၈း၃၀ တွင်မိုးထစာစားကတ်သည်။
……..” အဘောင်…ကျနော့်ဇာတိသိရေမလား………” လဖက်ရည်သောက်ရင်း မြတ်မင်းဦးစကားစလာသည်။
“…..အော်..လာဗျာယ်…….ပေါက်တောသားတိ တော်ကြောင်း၊တက်ကြောင်း ကြွားဖို့ဗျာယ်ထင်ရေ သန်းဦးခိုင်…….” အဘောင်ကလှမ်းကစပ်သည်။
……….” အဘောင်ကလေ့ ကျနော် စကားအကောင်းပြောဖို့ပျင်နိန်စွာရာ…….ဒေပိုင်ပါ…….ပေါက်တောမှာ လည်ရိုးတော်ဓာတ်ဆိုရေ စေတီတစ်ဆူဟိရေ…….” မြတ်မင်းစကားဆက်မပြောခင် သန်းဦးခိုင်က…..
“ အော်…….ယင်းဓာတ်တောင်ကျောင်းကို အချေခါ သန်းဦးခိုင် ရောက်နိန်ကျပါ……အင်္ဂရားပန်းချေတိကောက်..ဘုရားမှာလှူ၊ သူငယ်ချင်းတိနန့်တောင်အောက်မှာ ဗြီးတမ်း လိုက်တမ်း ကစပ်ကတ်စွာတိ…သတိတောင်ရလာဗျာယ်……..၊..”
……” ယော်…ယဂေယင်…..နင်ရို့ ၂ ကောင်စလုံးပေါက်တောဇာတိ တိမလားယေ…မတွိကတ်လားယဂေ ဓာတ်တောင်မှာ………၊” အဘောင် ကောက်ညုင်းထမင်းမောပနာဝင်ထောက်သည်။
“ ကျနော်လေ့ ယင်းချင့်ကို သန်းဦးခိုင်ကို မီးကြည့်ချင်နိန်စွာပါ….ကျွန်တော် ၁၀ နှစ်သားအရွှယ်လောက် သန်းဦးခိုင်ဆိုရေ ကလိန့်မေချေတစ်ယောက်ကို အင်္ဂရားပန်း ပီးဖို့ပါရေ……..ယင်းကလိန့်မေချေရေ အဂု ကျနော်တွိနိန်ရရေ သန်းဦးခိုင် လား မသေချာလို့ကျနော် မမီးဝံ့စွာပါ……ယင်းကလန့်မေချေကို ကျနော် နှမချေ အရင်းပိုင်စတွိနိန့်ကပင်ခံစားမိနိန်ပါရေ………”….. မြတ်မင်းဦး စကားအရှည်ကြီးပြောနိန်သည်……..
“ အော်…….ဆော်ရီပါ ကိုမြတ်မင်းဦး အကျွန်က ကကောင်းအငယ်ဆိုခါ မမှတ်မိ မှတ်မိဖြစ်နိန်ပါရေ…..အကျွန့်ကို ပန်းပီးရေ ကလေချေတိက မကန်ပါလေ..အကျွန်စတားပါ…ဟဟ..” သန်းဦးခိုင်ရယ်လျက် မြတ်မင်းဦးကစပ်လိုက်သည်။
…” ကစပ်စွာပါရာ သန်းဦးခိုင်ဆိုကေ အကျွန်ရာဖြစ်နိုင်ပါရေ….အကိုမြတ်မင်းဦးကိုလေ့ မြင်မြင်ချင်း အကျွန် အကိုအရင်းပိုင်ခံစားမိပါရေ……”…….
“..........အော်နင်ရို့ ၂ ကောင်က အချေကဘင်ရီစက်ဟိကတ်စွာကို….အေး….အေး…. ရှိဘ၀က ကံဟိလို့ဆုံတွိကတ်တေမလားယေ………” အဘောင်က လလေးနနက်ဝင်ထောက်ပြသည်။
“..အော်…….စကားပြောကောင်းနိန်လိုက်ကတ်စွာ….မြင်းဂါရီဆရာတောင်ရောက်နိန်ဗျာယ်……”” သန်းဦးခိုင် လှမ်းသတိပီးလိုက်သည်။ မြောက်ဦးတစ်ပတ်ဘုရားဖူးရန် သူရိူ့သုံးယောက် မြင်းဂါရီထက်တက်လိုက်ကတ်သည်။ မဟာဆန်ဖုန်ထူမြောက်ဦးလမ်းကြားချေရို့ဂန္တ၀င်မြောက်လှသည်။ မြင်းဂါရီချေစီးရစွာလေ့ မိုးပျံရထားစီးရစွာထက်အရာသာဟိလှသည်။ မြင်းဂါရီသည်တရွိရွိနှင့် သျှစ်သောင်းပုထိုးတော်ကြီးမှအနောက်ဘက်သို့ ပေ (၃၀၀) ခန့်ကွာတွင်တည်ဟိသောထုက္ကသိမ်ပုထိုးရှိထိုးရပ်လိုက်သည်။
………….. “ ဝေး…အသူ လမ်းပြလုပ်ဖို့လဲ……. လမ်းပြလုပ်တေလူ ဘုရားသမိုင်းတိအားလုံးရှင်းပြရဖို့နန်း…”…
အဘောင်ကစကားစလိုက်သည်။ မြတ်မင်းဦးနှင့်သန်းဦးခိုင် တစ်ယောက်မျက်နှာတစ်ယောက်ပြုံးကြည့်လျက်…
“…. အကိုမြတ်မင်းဦးက သမိုင်းတိ ကကောင်းဖတ်ထားရေလို့ပြောရေ အစွမ်းပြဖို့အချိန်ရောက်ဗျာယ်မလားယေ..ခိခိ…” သန်းဦးခိုင်ဝင်ကစပ်သည်။
အဘောင်သျှင်ကလဲ့…. “ ဟုတ်တေ မြတ်မင်းဦး…..မြီးချေ သိသလောက်ပြောပြ…အဘောင်ကြားက၀င်ဖာပီးမေလေ…”.. မြတ်မင်းဦး ငြင်းဖို့အခက်။ “ ….ကောင်းဗျာယ်… နှမတော်အတွက် မောင်ကြီးရှင်းပြရဖို့မလားယေ…..” ရိသဲသဲကစပ်လိုက်သည်။ မြတ်မင်းဦးစကားအဆုံးတွင် အဘောင်နှင့်သန်းဦးခိုင်ဖက်က လက်ခုပ်သံတညံညံထွက်ပေါ်လာသည်။
….. “ ဒေပိုင်ပါ နှမတော် နန့်မယ်တော်…. ဒေထုက္ကသိမ်ဆိုရေပုထိုးတော်ကြီးရေ တောင်ဘက်ကနိန် မြောက်ဘက်ကို (၁၁၀ ) ကျယ်ပြီးကေ..အရှိနန့်အနောက်ကို ပေပေါင်း (၁၃၇) ပေ ရှည်ပါရေ။… ပေ(၂၀) မြင့်ရေလေ…။ ပုထိုးအလှူသျှင်က ဘုရင်မင်းဖလောင်းနန့် မိဖုရားကြီးသျှင်လတ်ရို့ဖြစ်ပြီးကေ အေဒီ ၁၅၇၁ ခုနှစ်ပါတည်းထာခစွာပါ……” မြတ်မင်းဦးဆရာကြီးလီသံဖမ်းလိုက်သည်။
……..” အဘာ…ငါ့မြီးအတိအကျကာ……” အဘောင်ဝမ်းသာအားရပြောလိုက်သည်။
သန်းဦးခိုင်ကမျက်လုံးချေမှတ်စိမှတ်စိနှင့်မြတ်မင်းဦးကိုလှမ်းအကြည့် မြတ်မင်းဦး လိုင်ခြောင်းရှင်းလိုက်ပြီး ……..
“..အဟမ်း….ယပြီးကေ မြောက်ဦးမြို့ နန့် ရခိုင်ရာဇ၀င်မှာ ဒေပုထိုးကို ရခိုင်ယဉ်ကျေးမှုပြတိုက်လို့တောင် တင်စားသင့်ပါရေ……၊ခိုင်ခံ့ရေ ကျောက်တုံး၊ကျောက်သားတိနန့်လှိုက်ဂူတစ်လျောက်မှာ ဂူကျောင်းငယ်(၁၄၆) ကျောင်းရှိရေလေ….ယင်းချင့်တောင်ဇာကဖို့လဲ….ဂူငယ်ရို့တစ်ဘက်တစ်ချက်စီမှာ ၁၅ ရာစုမြောက်ဦးခောတ် ရခိုင့်အမျိုးသား၊အမျိုးသမီး ၀တ်စာဆင်ယင်မှုတိကိုလေ့ လေ့လာနိုင်ပါရေ…….”
သန်းဦးခိုင်က အားကျမခံ……… “ ယင်းချင့်တောင် ဇာဟုတ်ပါဖို့လဲမောင်ကြီး…..ဘောင်းတော်လေးဆယ် ရခိုင်အမျိုးသမီးဆံထုံးပုံ ခြောက်ဆယ်လေးမျိုးကိုလေ့ ကျောက်ဆစ်လက်ရာတိနန့် အနှစိတ်ထုလားထားသိမ့်ရေလေ………”၊ ………
“…ဒေမောင်နှမနှုစ်ယောက် ကကောင်းတော်ယင့်………၊” အဘောင်ဝင်အားပီးသည်။ “ ကဲကဲ စကားလေ့ပြောဘုရားလေ့ ဖူးကတ်မေ….၊”
သူရို့သုံးယောက်ပုထိုးတော်ကြီးအား လက်ယာရစ်ခရုပတ်ပုံသဏ္ဍာန်လည့်လှည်းဖူမြှော်ကတ်ပြီး၊ သျှစ်သောင်းပုထိုးတော်ကြီးသို့လက်လျှောက်လာကတ်သည်။
မားမားမတ်မတ်ရပ်နိန်သောအာနန္ဒစန္ဒြားကျောက်စာအပါးအရောက်တွင် မြတ်မင်းဦးကြက်သီးထလာသည်။ သန်းဦးခိုင်ကာ သျှစ်သောင်းပုထိုးတော်ကြီးပတ်တည်ဟိသောအရံစတုပါစေတီချေရို့ကိုငေးကြည့်နိန်မိသည်။
အဘောင်က “………..မြီးချေရို့ ဒေကျောက်စာရေ ကမ္ဘာမှာ ကကောင်းအံ့သြဖို့ကောင်းရေ ကျောက်စာတစ်ချပ်ဖြစ်တေ မှတ်ထားကတ်…ကမ္ဘာသမိုင်းနန့်ရခိုင့်သမိုင်းမှာ ကမ္ဘာလောက်အရေးကြီးရေ ကျောက်စာတစ်ချပ်ချင့်……….”..
“…… ဟုတ်ပါရေ အဘောင်…….ဒေစာမှာ စာကြောင်းရေ (၇၁) ကြောင်းခန့်ပါပြီးကေ၊ အေဒီ(၇၂၉) လောက်မှာထိုးထခစွာဖြစ်တေလို့ပြောကတ်တေမလား၊ ယဂေလေ့ ပိုထူးခြားနိန်စွာက ဒေကျောက်စာရေ ကမ္ဘာမှာ အဂွင့်ရှားပါးရေ စာအရွီးသားတိကိုတွိရပါရေ……(၁၀) ရာစုလောက်ကအသုံးပြုခရေ စာကြောင်းရေ (၂)ကြောင်းပါပြီးကေ၊ အေဒီ(၆၀၀) ခန့်က ရွီးခရေစာအရွိးသားတိလေ့ပါရေလေ………။” မြတ်မင်းဦးဝင်ဖြည့်ပီးသည်။
“………….ဟုတ်ပါရေ ကိုမြတ်မင်းဦး…….ဒေကျောက်စာကို( ၁၅၃၅ ) ခုနှစ်မှာ ဘုရင်မင်းဘာကြီးက ဝေသာလီမြို့တော်ဟောင်းကနိန်ဒေကိုယူလာစွာလေ……..”……… သန်းဦးခိုင်လေ့ဝင်ပြောသည်။
“ …အေး…အေး… သျှစ်သောင်းထဲဝင်ကတ်မေလာ……ဒေသျှစ်သောင်းကိုလေ့ ဘုရင်မင်းဘာကြီးက အေဒီ(၁၅၃၁) ခုမှာ တည်ထားခစွာဖြစ်တေ မြီးချေရို့…..”
“ ဟုတ်ပါရေ အဘောင်……ရခိုင့်သမိုင်းမှာ အထင်အရှားဆုံး ပုထိုးတော်ကြီးပါ…..ရခိုင်ပိုင်ရေဒေသဖြစ်တေ ဘင်္ဂါ(၁၂) မြို့စွာ သူရတန်ဘုရင်တိလက်ထဲကိုကျလားလို့ ဘုရင်မင်းဘာကြီးကတိုက်ခိုက်သိမ်းပစ်ပြီးကေ အပြန်မှာ ဒေသျှစ်သောင်းဘုရားကိုတည်ခစွာလို့ပြောကတ်ပါရေ…………” မြတ်မင်းဦး တက်သလောက်ပြောပြာနိန်သည်။
သန်းဦးခိုင်ကလေ့…………”………ဟုတ်ပါရေ……ဘုရင်မင်းဘာကြီးစွာ ဗုဒ္ဒဂါယာမှယူဆောင်လာရေ ဓာတ်တော်ပေါင်းရှစ်သောင်းလေးထောင်နန့်ရွှေ၊ငွီ၊ကြီး၊သံ၊ကျောက်မျက်ရတာနာနန့်ထုလုပ်ထားရေ ဆင်းတုတော်ပေါင်း သျှစ်သောင်းကိုဌာပနာတည်ကိုးကွယ်လို့ သျှစ်သောင်းပုထိုးတော်လို့ခေါ်ရေလို့ အဖိုးသျှင်ပြောပြခစွာ မှတ်မိပါသိမ့်ရေ…….၊”
“အေး အေး မြီချေရို့ဒေပိုင်ကိုယ့်သမိုင်းကိုကိုယ်လေ့လာစိတ်ဝင်စားကတ်စွာသိရလို့ အဘောင်ဝမ်းသာရေ ဝေ…” အဘောင်ဝမ်းသာအားရ အားပီးသည်။
ဘုရားအတွင်းသို့လှိုင်းဂူကြားထဲတိက၀င်ရောက်ဖူးမြော်ကြသည်။ ယင်းနောက် အံတော်ဘုရား၊ လေးမျက်နှာ၊လောင်ပွန်းပြောက်စေတီစသည့် အနီးအပါးမှ ဘုရားများကိုဖူးမြော်ကြပြီး ကိုးသောင်းပုထိုးတော်ကြီးသို့မြင်းဂါရီချေ တရွိ့ရွိ့နှင့် ဦးတည်လာကတ်သည်။
ကိုးသောင်းပုထိုးတော်ကြီးသို့အလားလမ်းတစ်လျှောက်ဖုန်းလုံးတိအလုံးလုံးတတ်လာသည်။ မြင်းနီတော်ကြီးက သစ္စာဟိဟိအမှုးတော်ထမ်းရွှက်သည်။ ဖုန်လုံးဖုန်ဆိုးတိကမြတ်မင်းဦးဆန္ဒကို အနိုင်မယူနိုင်၊ ဇာကြောင်းမှန်းမသိ ကိုးသောင်းပုထိုးတော်သို့ မြတ်မင်းဦးရောက်ချင်ဇောပြင်းထန်နိန်သည်။ စိတ်ထဲမှလည်းဝမ်းနည်းမှု၊၀မ်းသာမှုနှင့်ကျင်ကိုင်နိန်ရသည်။ မြတ်မင်းဦးပါ၊သန်းဦးခိုင်ပါ နှစ်ယောက်လုံး ကျောက်တုံးတိပိုင်ငြိမ်သက်လျက်ဟိသည်၊ တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက် အစကပိုင်မကစပ်၊မပြောမဆိုတည်ငြိမ်လျက်ဟိသည်။
“ ကဲ ကဲ……နင်ရို့နှစ်ယောက်ကကောင်းမှိုင်ကတ်တေဂါ……၀ါကြီးမညောင်ဘဲ လူပျိုချေရို့ အပျိုချေရို့ညောင်းနိန်ကတ်ယာဟန်…” ဂါရီထက်ကဆင်းလျက်အဘောကစပ်သည်။
“…….ဟုတ်ပါရေ အဘောင်…..ဇာကြောင်းလေ့ မသိ ဒေဘုရားနားရောက်တေမှာ ကျနော်ဝမ်းနည်းရေခံစားချက်တိဖြစ်နိန်ပါရေ………..၊ အချေခါ ဒေပုထိုးရေ တောတိအုပ်လို့ လူတိလာမဖူးကတ်ပါ…….မဖူးရလို့ ကျနော် ငိုဖူးပါရေ……ဒေတစ်ခေါက်ပြန်ရောက်တေမှာ ကျနော်ဝမ်းနည်းမိနိန်ပါရေ……..” မြတ်မင်းဦးစကားအဆုံးတွင်၊
“……..ဟေ့ ..သန်းဦးခိုင်…….နင့် မောင်…စကားတိလူဝင်စားပိုင်ကာ..” ပြုံးလျက်အဘောင်က၀င်ပြောသည်၊ ယင်းနောက် နှစ်ယောက်သား အဘောင်ကိုကူလျက်ဘုရားထက်သို့တက်ပါလတ်သည်။
“..ကဲ…နင်ရို့နှစ်ကောင် ညောင်းရေအတွက်နန့် ငါ……ဒေဘုရားသမိုင်းအကြောင်းပြောပြမေ…၊ ဒေပုထိုးကို အေဒီ ( ၁၅၅၃ ) နှစ်မှာ ဘုရင်မင်းဘာကြီးမှာ သားဖြစ်တေ ဘုရင်းမင်းတိက္ခာတည်ထားကိုးကွယ်ခစွာဖြစ်တေ၊ ယင်းအတွက်နန့် ရခိုင်သမိုင်းမှာ အဖသျှစ်သောင်း၊ သားကိုးသောင်းဆိုပြီးကေ ဟိရေလေ……….၊ ရခိုင်ဗိသုကာ လက်ရာအဆင့်အတန်းမြင့်ကြောင့် ဒေဘုရားထုလုပ်ပုံကလေ့ သက်သီခံနိန်ရေမြီးချေရို့”………..
မြတ်မင်းဦးက……”…ရခိုင်သမိုင်းမှာ မြန်မာရို့အင်းဝက စစ်ချီလာခါ ဘုရင့်ကိုယ်ရံတော်တပ်က တပ်မှုတစ်ယောက် ဒေဘုရားမှာသစ္စာဆိုပနာ မိမိကိုယ်ကို သတ်သီလားရေလို့ ကျနော်ကြားဖူးပါရေ….”
ယင်းပိုင်ပြောနိန်ချိန်တွင် သန်းဦးခိုင်က… “ ………..ယင်း မင်းသားမှာ သူကကောင်းချစ်တေ နှမတော်မင်းသမီးချေ တစ်ပါးဟိရေလို့လဲ ကြားဖူးပါရေ၊ အင်းဝမှာ ကံကုန်လားရေလို့ဆိုပါရေ……”
“……..အင်…….ကြွီကွဲစရာတိနန့် ရခိုင်သမိုင်းမလားနန့်……” မြတ်မင်းဦးမှတ်ချက်ချလိုက်သည်။
ယင်းနောက်အဘောင်က ပုထိုးတော်ကြီးလှိုက်ဂှုထဲတွင်တရားရှုလိုကြောင့်ပြောသဖြင့် မြတ်မင်းဦးနှင့် သန်းဦးခိုင်ရို့ပုထိုးတော်ကြီး အနောက်ဘက်သို့ထွက်ပါလတ်ကတ်သည်။
သန်းဦးခိုင်က……..” ကိုမြတ်မင်းဦး……ဒေနားမှာ ရီကန်ကြီးတစ်ကန်တူးကေ ကောင်းဖို့နန့်…..ယပြီးကေ ကြာဖြူ၊ ကြာနီ၊ကြာညိုချေ စိုက်ပနာ လောကကို အလှဆင်းပီးဖို့မလားယေ……..”
“ ဟုတ်တေ သန်းဦးခိုင်……ညီမချေ ပြောမှ အကိုလေ့ မျက်စိမှာ မြင်ယောင်မိလာဗျာယ်…….ဘုရားဖူးလာရေ ခရီးသည်တိအညောင်ဖြေစရာလေ့ ဖြစ်ဖို့မလားယေနန်း၊ ယေနန့် သန်းဦးခိုင် ရခိုင်သမိုင်းတိ အင်ဒန်သိရေမလားရေ……ရခိုင်သမိုင်းမှာထင်ရှားခရေ သုဝဏ္ဏဒေ၀ီ (စောပြည့်ညို) ရွီးစပ်ခသော သိန်ကန်မိန်တွင်ရတုကို ရဂေတစ်ခေါက်ချေ ဆိုပြပါဘလင်၊အကိုနားထောင်ကြည့်ချင်လို့ပါ……
” သန်းဦးခိုင် ရှက်စကေချေနှင့်ပြုံးလိုက်ပြီး…….” ယင်း ရတု…ကောင်းရှည်ပါရေ ရစွာ တစ်ပိုင်ချေ ဆိုပြပါမေ…….ဒေပိုင်ပါ နားထောင်ကြည့်ပါနန်း ………
"လျှောက်တင်ခါပန်း၊ ရာသီဆန်းလျင်၊ နန်းမြင့်အောင်မြီ၊ ဆယ့်နှစ်လီရစ်သန်းမြူး၊ မောက်သူဇာကေ၊ ဒက္ကာဆိပ်ကမ်းဦးက၊ကျေးဇူးဂုဏ်သျှစ်တန်၊ အမတ်လိမ္မာ၊ ထိုမြို့ရွာတွင်၊ အာဏာသုံးခယ့်ပြန်မှ၊ ပြောင်ဆဒ္ဒန်မာတင်ရိုး၊ ထွက်လျှင်မပြန်၊မလှန်ကိုယ့်မင်းမျိုးတည့်။ ဆိုးကောင်းနှစ်ပါးတွင်၊ ရိပ်ခြည်အမျှင်၊ အသျှင်သိလျှင်းပင်တည့်။ ပညာသျှင်အုပ်ထိန်းမှ၊ မြို့ပြပြည်ရွာ၊သာယာစည်ကားလှအယ့်။ မင်းယောက်ျားဓမ္မတာ၊ ပညာမဲ့ကွက်၊ ညာဏ်မစွက်သော်၊ ပြည်ထက်မထားရာတည့်။
“ ကကောင်းကျေးဇုတင်ပါရေ…..အလှပကြက်သရေဟိပြီးကေ နားဝင်ပီးယံလှပါရေ သန်းဦးခိုင်နှမချေ…..အဖရခိုင်ပြည်ကို တက်တေဘက်ကဖြည့်ဆည်းစောက်ရှောက်နိုင်ရေ ရခိုင်အမျိုးသမီးမြတ်တစ်ယောက်ဖြစ်ပါစီလို့ အကိုဆုတောင်းပီးပါရေဝေ…”
“ပီးရေဆုနန့်ပြည့်ရပါစီကိုမြတ်မင်းဦး၊ အကိုလေ့ ပညာတတ်တိအများကြီးတတ်ပြီးကေ အဖပြည်ကိုပြန်လာပနာ ပူလောင်န်ိန်ရေ အဖရင်သွီးတိကိုထီးချေတစ်လက်၊ ရီချေတစ်ခွက်နန့်ကြည့်ရှုးစောက်ရှောက်နိုင်ပါစီလို့ ဆုတောင်းပီးပါရေ………။”
“ ကျေးဇုတင်ရေ ညီမချေ…တစ်နိန့်တစ်ရက်အချိန်တတ်ကေ ဆိုက်ဘေးရီးယားချေတိ အိမ်ပြန်လာကတ်ဖို့နန်းရာ…ကဲကဲ နောက်ဘုရားတိလေ့ မကန်ဖူးစရာဟိသိမ့်ရေ အဘောင်ဘက်ကိုလားကတ်မေနန်း” ၊
သူရို့နှုစ်ယောက်အဘောင်ဘက်သို့လာရာလမ်းတွင် ဆောင်းပန်းရိုင်းချေတိဝေဆာဖူးပွင့်နိန်ကတ်သည်။ မြတ်မင်းဦး ပန်းရိုင်းချေတစ်ပွင့်ကို ညုင်သာစွာခူးဆွက်လိုက်ပြီး …….
“ ကဗျာအဖတ်တော်ရေ နှမချေသန်းဦးခိုင်အတွက် အကိုဘား ပန်းတစ်ပွင့်လက်ဆောင်ပီးမေ၊ ဒေမှာကြည့် မလှလား…….|”
“ အဝေး…ပွင့်ဖတ်ချေတိဖြူဆွက်လို့ ဘဇောင်ချစ်ဖို့ကောင်းချင့်……..” သန်းဦးခိုင် ခေါင်းချေအသာချေငုံ့ပီးသည်။ မြတ်မင်းဦးက ဂရုနာသက်စွာ ပန်းချေကို မဲမှောင်တောက်ပနိန်ရေ ဆံကေသာကြားချေထဲသို့အသာချေထိုးပန်ပီးလိုက်သည်။
“ သန့်ခယူ…” သန်းဦးခိုင်မှတ်ချက်ပီးလိုက်သည်။
ကိုးသောင်းပုထိုးတော်ကြီးအရောက် အဘောင်သျှင်တစ်ယောက် မြင်းဂါရီထက်ကအဆင့်သင့်စောင့်လို့……..။ အဘောင်သျှင်ကိုသူရို့နှစ်ယောက်ပြုံးပြပြီး ပုထိုးတော်ကြီးဂူပတ်လမ်းအတိုင်းလှည့်လည်ပူဇော်ကတ်သည်။ ပြီးလားရေခါ မြင်းဂါရီချေသည် မြောက်ဦးမြို့အရပ်လေးမျက်နှာမှ ဘုရားတိအစုံလိုက်ပြပီးသည်။
သဇင်ပန်းခိုင်တမြိုင်မြိုင်ရခိုင်ဘုရားပေါင်း ဆိုသည့်စာချိုးအတိုင်း မရွီးမတွက်နိုင်သော စေတီပုထိုးရို့ကို မြတ်မင်းဦးရို့ မညောင်းတန်းဖူးမျော်ကတ်ပြီး ညဇာဘက် ၆ နာရီချိန်ဟိုတယ်သို့ပြန်ရောက်ကတ်သည်။ စစ်တွေသို့နောက်တစ်ရက်နိန့်ပြန်ထွက်လာကတ်ပြီး၊ မြတ်မင်းဦးသည် သူ့ရွှာသို့ တစ်ပတ်ခန့်အလည်လားပြီး၊ သူရို့သုံးယောက် ရန်ကုန်မြို့သို့ ဇွန်န၀ါရီလ ၁၄ ရက်နိန့်တွင်ပြန်လည်ရောက်ဟိကတ်သည်။ ရန်ကုန်တွင် တစ်ပတ်ခန့်လလ်ပတ်လျက် အမေရိကန်သို့ ဇွန်န၀ါရီလ ၂၅ ရက်နိန့်ပြည်လည်ထွက်ခွာရန် ရန်ကုန်အပြည်အပြည်ဆိုင်ရာလီဆိပ်သို့ရောက်ဟိလာကတ်သည်။
နိန့်ရက်။………..။ ဇွန်န၀ါရီလ( ၁၄) ရက်
အချိန် ။…………။ နိန့်ခြင်းဘက် ( ၂) နာရီ
ပြောသံဆိုသံရို့ရရောင်သတ်နိန်သည်။ အေးငြိမ့်သောအဲယားကွန်ခန်းမကြီးတွင်မအီးစက်နိုင်ကတ်သည့်လူနှစ်ယောက်ဟိသည်။ တစ်ချက်ချေဘင်ခင်မင်ခဂေလေ့ မောင်နှမအရင်းပနာ သံယောဇဉ် နှောင်ဖွဲ့မိသည့်ခံစားချက်မျိုး မြတ်မင်းဦးနှင့်သန်းဦးခိုင်ရင်ဘက်တွင်ဖြစ်ပေါ်လျက်သိသည်။
သန်းဦးခိုင်က အဘောင်နှင့်ဟန်ဆောင်စကားပြောနိန်သလောက် မြတ်မင်းဦးက လီယဉ်ပျံလက်မှတ်ကို ထိုလျန်ဒေလျံရက်ပြတ်ကြည့်နိန်မိသည်။ သူသည်တိတ်ဆိတ်သလောက်ဂနာမငြိမ်၊ ရင်းထဲက ပြင်းပြသောခံစားမှုတစ်ခုဖြစ်ပေါ်နိန်ကြောင့်သန်းဦးခိုင်သဘောပေါက်သည်။
“ သန်းဦးခိုင်…….မြတ်မင်းဦးဘက်ကိုလားလီ၊ စကားချေပြောနိန်ခီ၊ ယင်းသူတစ်ယောက် ကောင်းမှိုင်ရေမြင်ယင့်၊ နင်နန့်ခွဲရဖို့ယာဖြစ်လို့ဟိဖို့…….”…… အဘောက်သျှင်ဂရုနာသက်စွာပြောသည်။
သန်းဦးခိုင် အနားရောက်မှ မြတ်မင်းဦး ဟန်ဆောင်ပြုံးပြသည်။ ……..” ဟန်ဆောင်ပြုံးပြဖို့မလိုပါ..ကိုမြတ်မင်းဦး…၊ အကျွန်လေ့ ကိုမြတ်မင်းဦးခံစားနိန်ရရေ ခံစားချက်ကိုနားလည်ပါရေ…..၊ အကျွန်လေ့ ကိုမြတ်မင်းဦးကို အကိုအရင်းတစ်ယောက်ပိုင်ထထူးဆဆန်းခံစားမိနိန်ပါရေ………၊”
“………ကျေးဇုတင်ပါရေ နှမချေ….အကိုလေ့ ပညာပြည့်စုံလို့ ပြည်တော်ပြန်လာရေခါ….နှမချေနန့်အကိုနန့် မောင်နှပိုင်တစ်သက်လုံး ချချစ်ခခင်နိန်ကတ်ဖို့နန့်……….” ပြောရင်း မြတ်မင်းဦး အသံတိတုန်လာသည်။ မျက်လုံးအိမ်ရို့လေ့မျက်ရည်စချေတိစိုလို့ ………။
“ …..သန်းဦးခိုင်က အကိုလာဖို့နိန့်ကို ရက်ပြတ်မျော်နိန်လီဖို့ရာ……..၊ စာတိပို့နန်း အကို၊ အိမ်တာနတ်နန့်လေ့ နိန့်တိုင်းပြောကတ်ဖို့လေ၊………” သန်းဦးခိုင် ပ၀ါချေနှင့်မျက်လုံးချေတိကို ပွတ်သုတ်ပြီးပြောသည်။
“…….စိတ်ချ နှမချေ…အကိုလေ့ ရက်ပြတ်သတိရလီဖို့စွာ……တစ်နိန့်တစ်ရက်ကျကေ အဖပြည်အတွက် အကိုရို့အားလုံးဝိုင်းပနာလုပ်ကတ်ရဖို့လေ…….အကိုရို့တိပြန်မလာဂေ…ကကောင်း တစ်ကိုကောင်းဆန်လီဖို့ယာ…ဇာကိုရောက်လို့ ဇာအဟာရတိကိုစားရစားရ… အဖပြည်က အဟာရ၊ အဖပြည်က သဘာဝတိနန့် တခြားစီပါဝေ….. ဇာလူဇာလုပ်လို့ ဇာပိုင်ပင်ဖြစ်ဖြစ် နောက်ဆုံးကျဂေ အကိုရို့က ရခိုင်သားတိရာ…………….ရခိုင်သာဆိုစွာ ရခိုင့်ဟန်၊ရခိုင့်မာန်၊ ရခိုင်ပြည်မှာ ပျော်ရေလူတိရာ…….အကို..ရည်မှန်းချက်တိပြီးစွာနန့် အိမ်ပြန်လတ်ပါမေ………………………”
မြတ်မင်းဦးစကားတိဇာလောက်ရှည်လားလီမသိ၊ လီဆိပ်မှ ကြေငြာချက်ထွက်လာမှစကားတန့်လားသည်။ ထွက်ခွါဖို့အချိန်ရောက်လာသည်။ မြတ်မင်းဦးနှင့်သန်းဦးခိုင် ထိန်ချူပ်မရ ငိုမိကတ်သည်။ သန်းဦးခိုင်တစ်ယောက် check-in အလွန်ထိ မြတ်မင်းဦးကို မောကြည့်ရင်း ငိုရင်း၊ တတာလေ့ မညောင်းနိုင်ပြနိန်မိသည်။
တစ်နာရီခန့်အကြာထိသန်းဦးခိုင်တစ်ယောက်လေဆိပ်ထိုင်ငုပ်တုပ်ထိုင်နိန်မိသည်။ လေယဉ်ထွက်သံကြားသောအခါ မျက်ရည်ရို့အညာရီပေါက်လာပြီး၊မြတ်မင်းဦးပါလားရေ လီယိုင်ပျံကို ဗြီးထွက်ကြည့်လိုက် သူ့ကိုဆိုပြဖူးခရေ ရတုချေကိုစိတ်ကူနှင့်ဆိုမိယင်း၊ သန်းဦးခိုင်လက်ချေပြ၊မျက်ရည်ချေတိခိုလျက်………
မှတ်ချက် (၂) ။…။တစ်ချို့ရခိုင်အသံထွက်ရို့သည်လက်ဟိသရ(၃၃) နှုင့် ဗျည်းအက္ခရာ(၁၁)လုံး ဖြင့်အသံထွက်မှန်ရွီးရန်အခက်အခဲ့ရို့များစွာဟိသည်။…. ရခိုင်အသံထွက်အစစ်ရရန် က၊ခ..စသည့်သရ နှုင့် ဗျည်းအက္ခရာ နောက်ထပ်များစွာလိုအပ်နိန်ပါသည်။
Posted by KingMarayu at 08:100comments